अर्को चुपचाप विद्रोह- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पुस ८, २०७४ बिनु सुवेदी
काठमाडौँ — प्रेम कुनै मापनयन्त्रले नाप्नै नसक्ने गरी गहिरियो । प्रेम मात्रै गहिरिए त ठीकै हो, साथमा हरहमेसा सँगसँगै बस्ने चाहना यसरी अग्लियो कि त्यो गहिराइ र अग्लाइको तादात्म्यता मिलाउन बिहे गर्नैपर्ने भो । हो, बिहे गर्नैपर्ने भो । कसैको कर हैन आफ्नै मनको ठहर थियो यो । नत्र उमेरले भर्खरै २० मा टेक्दा, पढाइ आधाउधी पुग्दा नपुग्दा र करियर भर्खरै वामे सर्दै गर्दा म बिहे गर्दिनँ भन्न सक्ने थुप्रै आधारहरू भेटिन्थे ।
आधा रातसम्म च्याटमा भुलेर अनिदो आँखा लिएर कलेज जानुभन्दा, अफिसमा चापाचाप काम थाती राखेर मनभरि याद बल्झाउनुभन्दा जिन्दगी बरु छिट्टै उसकै आसपासमा अल्झाइदिन्छु भन्ने ठहर प्रस्तावका रूपमा अघि बढ्ने भयो । पहिले त उसैसँग, त्यसपछि आमासँग । पिरतीको राप रातोपिरो हुनेगरी बलिरहेका बेला उसले प्रस्ताव सदर गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर कोख, काख र पाखासम्म आफ्नै छत्रछायामा हुर्काएकी आमालाई छोरी जवान भइसकी भन्ने हेक्का सायद त्यतिबेला मात्रै भयो ।
सुरुमा त म प्रेममा छु भन्ने कुराले नै आमा छाँगाबाट खस्नु भो । हो म हुर्केको संस्कारमा बिहेअघिको प्रेम वर्जित छ, आजपर्यन्त । कसैलाई प्रेम गर्नु पूरापूर बिग्रिनु हो, र म प्रेममा छु भनेर जानकारी गराउनु हाकाहाकी अपराध गरेको हुँ भन्नु हो । त्यसकारण, म एक अपराधीसरह आँखा झुकाएर उभिएँ आमाका अगाडि । त्यतिबेलै देँखे, आमाको बायाँ गोडाको बुढीऔँलामा ठूलो चोट लागेको रैछ । कतै ठेस लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । नत्र कैयौँ दिनसम्म आमाको अनुहारसमेत हेर्न नपाउने चटारोबाट गुज्रिरहेका बेला खुट्टाको घाउमा के आँखा पर्दाे हो र † तर म कम्तीमा महसुस गर्न सक्थेँ, त्यो सुक्नै आँटेको घाउभन्दा मेरो आलो प्रस्तावले कैयौँ दुखाएको छ आमालाई । दुखाइ छोरीले मनमौजी गरेकोमा त छँदै थ्यो, साथमा दुखाइ अब छोरीलाई बिदाइ गर्ने बेला भयो भन्नेमा पनि । तर, बिनासल्लाह मेरो प्रस्तावबारे निर्णय सुनाउन सक्ने अवस्था आमाको थिएन । आमाहरू छोराछोरीलाई एक्लै हुर्काउन सक्छन् तर उनीहरूबारे निर्णय गर्न सक्दैनन् । यो मैले हैन, हाम्रो चलनचल्तीले भनेको हो । आमाले घरमा सल्लाह गर्छु भन्नु भो, मेरो मनमा आशाका काजुहरू फुर्न थाले, खै आमाका माथि के के बिते त्यो अनुभव गर्न मैले कम्तीमा अरू २० वर्ष त कुर्नैपर्छ होला । अहिले छोरीलाई काखमा राखेर यो लेखिरहँदा मलाई लागेको छ, त्यो बेला म पक्कै दुख्नेछु । सम्भवत: आमाभन्दा धेरै दुख्छु होला ।
मेरो प्रस्ताव अघि बढेको तीन दिनपछि आमाले भन्नुभो, ‘बुबासित कुरा भाथ्यो, यदि तैँले सोचेकै होस् र जिन्दगी राम्रै चल्छ भन्ने लाग्छ भने हाम्रो असहमति छैन ।’ आमाले अझै थप्नु भो, ‘यस्तो सम्बन्धलाई धेरै समयसम्म राखेर भन्ने बाटो पार्न हुन्न यही महिना बिहे गर्नुपर्छ ।’ आमा मेरो निर्णयमा असहमत पो हुनुहुन्थेन त, यसको अर्थ सहमत हुनुहुन्थ्यो भन्ने पक्कै होइन । खैर, बिहे हुनेभो आफैंले रोजेको र आफैंले खोजेको केटासँग । केटा पनि के भन्नु, आफ्नै प्रेमीसँग । तत्कालका लागि मेरो उपलब्धि त्यही थियो । म फुरुङ्ग भएँ, मनले पखेटा हाल्यो । झ्यालबाट बाहिर हेरेँ, असारे झरी सिमसिम बर्सिरहेको थियो । सोचेँ, ‘यस्तो झरीमा बिहे गर्नु र ?’
तर सोधिनँ ।
बुबा परदेशमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले मेरो बिहेको तयारीका लागि आमालाई भरथेग गर्न बेनीबाट दाइ आउने भयो । दिनदिनै असनका पसलहरू चाहरिन थाले । घरमा रातो साडीको सेट भित्रियो । असारे चटारोले गर्दा अंकलहरू बिहेमा सरिक हुन नसक्ने खबर दाइले पहिल्यै ल्याइसकेको थियो । त्यसैले बहिनीको हात ज्वाइँलाई सुम्पिने जिम्मा पूरापूर दाइको काँधमा आयो । तयारी पक्कै केही गरिरहेको थियो होला । म बिहान पाँच बजे निस्केर बेलुका ८ बजे मात्रै कोठामा आइपुग्थेँ । बीचमा के–के भयो, खास केही थाहा पाइनँ ।
बिहेको अघिल्लो रात !
आज मैले हातभरि मेहन्दी लाउनुपथ्र्याे । भोलि राम्री देखिन आजै पार्लर गइसकेको हुनुपथ्र्याे । सिलाइएको ब्लाउज म्याच गर्छ कि गर्दैन नापिसकेको हुनुपथ्र्याे । तर, राजनीतिक वृत्तमा चर्केको राज्य पुनर्संरचनाको बहसले मलाई राति अबेरसम्म घरबाहिरै राख्यो, अरू संसदीय पत्रकारहरूलाई जस्तै । म बिहेको अघिल्लो दिन बिदै पनि बस्न सक्थेँ हुँला तर यी सब तयारी हेर्नमा जति रंगीन देखिन्थे, मेरा लागि उत्ति नै फिक्का । मलाई त बस् साथ चाहिएको हो । म जान्दथेँ, मीठो सम्बन्धले श्यामश्वेत जिन्दगीमा पनि इन्द्रेणी छर्छ भनेर । राति हस्याङफस्याङ गर्दै आएको देखेपछि आमाले भोलिको बिहेबारे वृत्तान्त सुनाउनुभो । को–कोलाई बोलाइएको छ र बोलाउने लिस्टमा अरू को–को बाँकी छन् लगभग एकै सासमा भनेर भ्याउनुभो । उहाँको प्रश्न थियो, तेरा साथीहरूलाई नि बोलाइस् ? म मुस्काएँ । आमाले बुझ्नुहुन्छ म फिस्स हाँस्नुको अर्थ कुनै विषयमा फरकमत जनाउन सुरु गर्नु हो । हो, फरकमत ।
आगोको लप्काले पोल्ने गरी फनफनी जग्गे घुमाएर ‘मारे पाप पाले पुण्य’ भनेर सुम्पिएका छोरीहरू घर न घाट भएको धेरैचोटि देखेको छु । माइतीले परायालाई दान गरिसकेपछि फेरि माइतीलाई आँसु देखाउन हुन्न भनेर घरमै आँसुको आहाल बनाउने आमाहरूको जिन्दगी महसुस गरेकी छु । त्यसैले म पराइकै भए पनि दु:ख पर्दा फर्केर आउने आँगन र टाउको अड्याउने काख उस्तै होस् भन्ने चाहन्थेँ हमेसाका लागि । मलाई मान्छे वस्तुसरह भएकोमा अत्यधिक पीर पथ्र्याे, अहिले पनि त्यही पीरमा छु । फलाम दान हुन्छ, सुन पनि दान हुन्छ, गाई दान हुन्छ, अनि छोरी पनि । जान्ने बुझ्ने भएदेखि नै यो कुरामा चित्तै बुझ्नैथ्यो । आमा मरेपछि दागबत्ती दिनु र आँगन पोलेर छोरी सुम्पिनु सरोबरी हो भन्ठान्थ्यो मेरो दिमागले । अनि मनले पनि ।
...आमाले साडी देखाउनुभो... स्यान्डिल देखाउनुभो । भाइ, कुनामा बसेर पिलपिल गरिराथ्यो । दाइ बन्दोबस्तीमै व्यस्त थियो । आमालाई भनेँ, ‘आमा मलाई यस्तो केही पनि मन पर्दैन,’ दाइले जवाफ फर्कायो ‘यति त हाम्ले तेरा लागि गर्न पाउँछौँ होला †’ आज दाइलाई सोध्न चाहन्छु ‘दाइ मेरो दान मेरै लागि कसरी हुन्छ ?’ हो आमा, मलाई वस्तु हुन मन थिएन, गाई हामीले सम्मान गर्ने प्राणी हो तर पशु हो, मलाई पशु पनि हुन मन थिएन, त्यसैले मेरो विनिमय मैले स्विकार्न सकिनँ ।
भोलि बिहेको लगन छ, मलाई बिहे गर्नु छ तर दुलही बन्नु छैन । किन हो किन गहनालाई कहिल्यै सुन्दरताको प्रतीक मान्न सकिनँ । यही कुरा सुनाएँ, आमा र दाइलाई । एउटा टीभीको रिमोटमा समेत लड्न नसक्ने दिदी कसरी यति धेरै क्रान्तिकारी बनी भन्ने भावमा बिस्ताराको पल्लो छेउबाट हेरिरह्यो उसले । अब छोडेर जाँदै छे भनेर पनि होला सायद, दाइ र आमा मेराअघि गले । मैले मेरा तर्कले जितेँ या यो घरमा मेरो अन्तिम लडाइँ हो भन्ठानेर उनीहरूले नै जिताए । जे होस्, जितेँ । बिनासाडी चोलो, बिनापूजा, बिनाकन्यादान, बिनाकुनै खर्च बिहे गर्ने भएँ । मैले साँच्चै जितेँ, कन्यादानविरुद्धको एउटा युद्ध जितेँ । मैले दान हुन परेन । मेरो यो विजयका निमित्त मेरी आमाले रातभरि आँसु पिएकी छन् । मैले बिहेको नाममा जुटको झोलामा केही थान कपडा र किताब बोकेर हिँडेपछि पनि आमा बेस्सरी रोइन् रे । मनमा नलागेको हैन, मैले मेरो जित आमाको आँसुसँग साटेँ भनेर । तथापि कन्यादान गरेर डोली नै चढाएका छोरी चेलीका बुवाआमाले पनि हाँसीहाँसी बिदाइ गरेको मैले देखेको छैन ।
तर यसको परिणाम भयावह निस्कियो, यहीदिनदेखि मामाघरमा आउने–जाने मेरो बाटो बन्द भो । संस्कार नमानेको अभियोगमा दिदीबहिनीहरू टाढिए ।
बिहे गर्दा एउटा साडी पनि लगाउन नसक्ने बरु जिन्दगीभरि यसै बसेको भए पनि हुन्थ्यो भन्नेहरूको पनि लाइन थियो ।
लाग्छ मनमा कहिलेकाहीं, सबैले जस्तै गरी बिहे गरेको भए...? तर फेरि आफैंलाई धाप मार्छु, निदाइरहेकी छोरीतिर फर्किन्छु र अठोट गर्छु, कम्तीमा मेरी छोरीले दान हुने र नहुने विरोधाभासका बीचमा तनाव लिनुपर्ने छैन ।
दु:खसहित भन्छु, परिस्थिति आज उस्तै छैन । मैले त्यो विद्रोहसहित पहिरिएको सिन्दूर पुछिएको त हैन, खोसिएको छ । त्यो सानो विद्रोहले उचाइ लिन नपाउँदै बाटो बिराएको छ । तर विरासतको भारी थेग्न नसकेर म जिन्दगीभरि कसैकी श्रीमती हुन नसक्नुमा धेरै दोष मेरो होला, अलिकति दोष उसैको होला र केही दोष परिस्थितिको पनि । तर कुनै वस्तुजस्तै आफ्नैले आफ्नालाई जिम्मा लगाइरहँदा आँसुले बाटो छेक्दाछेक्दै पनि बाटो लाग्नुपर्ने बाध्यता कम्तीमा बेहोर्नु परेन । आफ्नै पदचाप फर्केर हेर्छु धेरैचोटि उदास भएहुँला तर कहिल्यै दास बन्न परेन । जिन्दगी आखिर सन्तुष्टिको त्यान्द्रोभन्दा बढ्ता के नै रैछ र ?
प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १०:४५
शिविरमा ‘हरियो ढुङ्गा’
पुस ८, २०७४ देवेन्द्र भट्टराई
काठमाडौँ — भुटानको न्याउली गाउँबाट लखेटिएर नेपाल आइपुगेका छविनाथ न्यौपानेको कथा उनीजस्तै लखेटिने १ लाख शरणार्थीभन्दा अलग छ । ६५ वर्षे छविनाथ अरूभन्दा कान कम सुन्छन्, बोल्नुपर्दा भक्कानिएर बोल्छन् । कुरो बुझ्न–बुझाउन अलिक मिहिनेत गर्नैपर्छ । उनकी श्रीमती हिमामायाँ पनि त्यस्तै छिन्, उनको जीवनशैली अलिक सुस्त छ । ७ छोराछोरीकी आमा हिमामायाँ हरक्षण जिउज्यान दुखिरहेझैं हिंड्छिन्, ढिकिच्याउँ भंगिमामा । उमेरमा भर्खरै ५० नाघे पनि यी आमाको थकान ७० माथिको देखिन्छ— क्लान्त र निरुपाय ।
दमक, बेलडाँगीको भुटानी शरणार्थी शिविरको सेक्टर–२ को एउटा छाप्रोबाट नजिकको गाउँतिर जाँदै गर्दा भेटिए छविनाथ । उनी एउटा सानो काँटको गाई डोर्‍याइरहेका थिए, पछिपछि जेठो छोरो ३० वर्षे देवनारायण थिए— छोरोमा पनि कुनै प्रकारको तदारुकता थिएन, सुस्त हिंडाइ थियो, मन्द हाउभाउ झल्कन्थ्यो । शिविर उचाल्ने गरी कराइरहेको गाईलाई ‘गोरु खोज्न’ बाउछोरा गाउँ हिंडेका रहेछन् ।
बाटैमा उभिएर एकै छिन भलाकुसारी गरेपछि बाउछोरै शिविरको आफ्नो छाप्रोतिरै फर्किए— सिंगो परिवार भेटाउन । परिवारमा जेठी छोरी राधिका थिइन्, ३१ वर्षीया । अरू छोराहरू जगनाथ, चक्रनाथ पनि छाप्रोबाहिर आए । परिवारमा सबैभन्दा सुस्त रहेको साइलो छोरो दामोदर भने विराटनगर जेलमा परेको ६ वर्ष भएको रहेछ, एउटा अमूक बलात्कार अभियोगमा । सिगो शिविरमा भनिंदोरहेछ, ‘त्यो सुस्तेले कसरी गर्‍यो होला र त्यस्तो काम ? फँसाइएको हो भनेर बोलिदिने कसले ?’
यो परिवारमा अलिक टाठाबाठा भनिएका दुई छोरी यनिका र निरमायाँ भने अमेरिका पुगेका रहेछन्— पुनर्बसोबास कार्यक्रममा । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि हरेक दातृ निकायको नजरमा छविनाथको सिंगो परिवार शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रममा छिर्न अयोग्य थियो— दाताको बुझाइमा यी ‘डिजेबल’ (विविध प्रकारले अशक्त) थिए, धर्तीका भारझैं । ‘खोइ, बाहिर–भित्र सबैतिरको आगो निभिसक्यो,’ परिवारका मुली छविनाथ चर्को बोलीमा भन्छन्, ‘यता नेपाल छिरेको ३० वर्ष नाघिसकेछ । अब त न आफ्नो न्याउली गाउँकै सपना देखिन्छ, न यता रतुवा बगरकै देख्न थालिएको छ । जिन्दगी त भीरको चिन्डोजस्तो पो भो— न टिप्न सक्नु, न हेरी बस्नु ।’
छविनाथको छिमेकमा भेटिएकी ८३ वर्षीया पूर्णवती तिम्सिनाको हालत पनि उस्तै थियो— निरुपाय । श्रीमान् बितेको १० वर्ष भैसकेछ । अर्को गुँडका सबै छोराछोरी अमेरिका पुगेका रहेछन्, आफ्नातिर कोही नाहीं ।
‘आफ्नो भन्नु यही एकमुठी सास छ,’ छाप्रो रुँगेर बसिरहेकी पूर्णवतीले सुनाइन्, ‘यो शिविर नरित्तिँदै मेरो सास गैदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, नभए त साह्रै एक्लिएर मर्ने भएँ । यही मात्रै चिन्ता छ ।’
सेक्टर–३ छिर्नेबित्तिकै एउटा वर–पीपल चौताराकै आडमा उमेरमा ८५ टेकेका देवीचरण—खिनामायाँ दम्पती भेटिए । यी दम्पतीका ११ जना छोराछोरी थिए । सबै सक्षम थिए, गतिला र आसलाग्दा पनि । आज कोही अमेरिका पुगे, कोही क्यानडा गए । साथमा भएको एउटै छोरो लोकनाथ पनि शिविरबाटै बेपत्ता भएको लामो समयपछि थाहा भयो— उसलाई भुटानको रबुना जेलमा राखिएको छ । शरणार्थी शिविरमा बसेर भुटानीकोस्वैच्छिक घरफिर्ती, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका कुरा गरेको सुराकीमा शिविरमैं आएर कुनै जासुसले उसलाई रातारात थिम्पु पुर्‍याएको रहेछ, त्यहाँबाटै गुपचुप जेलबन्दी । ‘ढुङ्गालाई माटोको भर, माटोलाई ढुङ्गाको भन्छन्,’ बयोवृद्ध देवीचरण भन्छन्, ‘हामी बूढाबूढी ढुङ्गामाटोजस्तै भयौं । एकअर्काेलाई हेरेर न रुनै सकिन्छ, न मन बाँध्नै सकिन्छ । बरु हामीलाई कुनै वृद्धाश्रममा लगिदिने उपाय खोजिदिनुस् न है ।’
अचम्म त यो छ कि शिविरबाट ती जो गए, उनीहरू पनि उता खुलेर हाँस्न सकिरहेका छैनन् । ती जो यतै रोकिए, उनीहरू पनि यता खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । शिविरभित्र ठूलो सन्त्रास छाएको छ, भय देखिन्छ । कोही बोलिहेरोस् मात्रै, भुटान सरकारका जासुस आएर शिविरबाटै टिपेर लगिरहेछन् । बोल्ने कसले ? बोलिदिने कसले ?
शिविरभरि विचलन र विघटन देखिन्छ । ७० नाघेका बूढाबूढी, विकलाङ्ग, अशक्त र ‘आपराधिक बात’ लागेकाहरू मात्रै भेटिन्छन् शिविरमा । अलिकति टाठाबाठा र सांसारिक नियम बुझ्नेहरू ‘स्पोन्सरसिप’ उपायबाट भए पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका गैरहेका छन् । शरणार्थी हकहितमा लागेको समूहका अगुवा युवराज राईका बुझाइमा, शिविरमा बँचे–खुचेका र सही अर्थमा अबका दिनमा ‘शरणागत’ परिवार पनि कुनै चमत्कारको अपेक्षा गरिरहेका छन् । कुनै एउटा बिहानीमाआफ्नो जन्मथलो फर्कन पाउने ‘अकल्पनीय’ समाचार पर्खनेहरू अझै केही छन्, अथवा शरणार्थी शिविरमा अझै किंवदन्तीझैं सुनिने ‘हरियो ढुङ्गा’ भेटिएको र रातारात जीवनशैली फेरिएको क्षण कल्पेर बस्नेहरू पनि छँदै छन् ।
हरियो ढुङ्गा : रिभिजिटेड
अहिले काठमाडौंमा लागिरहेको ‘हरियो ढुङ्गा’ नाटकको कथानकमा बेलडाँगीको शरणार्थी शिविर उभिएको छ । कथाकार उपेन्द्र सुब्बा र नाट्य परिकल्पनाकार सुनिल पोखरेलको रंगमंचले विचित्रको शरणार्थी संवेदनामा यसरी कथा बुनेको छ, लाग्छ— ‘म’ दर्शकले रतुवा र मावाको किनारमा बसेर यो रमिता हेरिरहेछ, ३० वर्षयता । लाग्छ— यो ६५ वर्षे ‘सुस्त शरणार्थी’ छविनाथ न्यौपानेको जिन्दगी हो जो ‘डिजेबल’ भएकै कारण (‘हरियो ढुङ्गा’ को निचुले कान्छो पात्रझैं) टेक्ने न समाउने हविगतमा पुगेको छ । आसपासमा छविनाथको दुर्दान्त नियति हेरिदिने न भगवान् छन्, न उनको आवाज सुनिदिने मान्छे नै कोही छ ।
स्वभावत: शिविरमा आफ्नै समाज थियो, ‘आउटसाइडर’ भनेर चिनिने समाजमा पनि उस्तै डाह, उस्तै कपट, प्रतिस्पर्धा वा जलन थियो नै । १ लाखबाट घटेको शरणार्थी संख्या अहिले १० हजारमा सीमित भएको छ, तैपनि इच्छा–आकांक्षा–सपनाहरू घटेका छैनन् । बिहान उठ्दा कुनै ‘लक्की–ड्र’ परिदियोस् अथवा उपेन्द्र सुब्बाले सुनेझैं, लेखेझैं गिट्टी कुटिरहेका बेला हातमा ‘हरियो ढुङ्गा’ आइपरोस् भनेजस्ता मनचिन्ते लड्डु खानेहरू अझै थुप्रै छन् । झन्डै मिथक बनिसकेको यो शरणार्थी पृष्ठभूमि खोतल्ने उपेन्द्रकै पटकथामा बनिसकेको छ फिल्म— ‘देश खोज्दै जाँदा’ । अहिले रंगमञ्चमा ‘हरियो ढुङ्गा’ मञ्चन हुन थालेपछि माटो गुमाउनेहरूको मानवीय संवेदनालाई अझ नजिकबाट छाम्न खोजिएजस्तो प्रतीत भएको छ । सोमालियादेखि सिरिया, इराकदेखि (पछिल्लोपटक) बर्मेली शरणार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय कथा–व्यथा पढिरहेका र हेरिरहेका पाठक–दर्शकलाई आफ्नै घर–आँगनमा भेटिएको ‘हरियो ढुङ्गा’ को कथानक उडन्ते पनि लाग्न सक्छ । तर, यो तीतो यथार्थ हो । रतुवा अथवा मावाका आसपासमा बस्ने धेरैले निचुले कान्छोलाई शिविरको कुनै छाप्रोमुनि अझै टोलाएरै बसिरहेको देख्न र भेट्न सक्छन् । शिल्पी रंगमञ्चमा कलाकार विपिन कार्की टोलाएभन्दा बढी !
‘समस्या समाधानका नाममा चाहे पुनर्बसोबास भनौं अथवा स्थानीय बसोबास,’ नाट्य परिकल्पनाकार एवं निर्देशक सुनिल पोखरेलको बुझाइ सारगर्भित लाग्यो, ‘भुटानी शरणार्थीभित्रको मानवीय संवेदना र यसभित्रको जटिलता कहिल्यै समाधान हुनेवाला छैन । संवेदनाको यो खिल हामी सबैको मन–मस्तिष्कमा अब कहिल्यै नमेटिने गरी गढिसकेको छ । त्यसैमध्येको एउटा घाउ हो, ‘हरियोढुङ्गा’ । त्यसैभित्र पिल्सिएको एउटा प्रतीक पात्र हो— निचुले कान्छो ।’
अनेक बधाई छ, ‘हरियोढुङ्गा’ लेख्ने र देखाउने सुब्बा र पोखरेललाई !
प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १०:४३